जहाँका मानिसहरु १२० वर्षसम्म बाँच्छन्, जो थलै नपरी हिँड्दा हिँड्दै मर्छन् ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»जहाँका मानिसहरु १२० वर्षसम्म बाँच्छन्, जो थलै नपरी हिँड्दा हिँड्दै मर्छन् !
जहाँका मानिसहरु १२० वर्षसम्म बाँच्छन्, जो थलै नपरी हिँड्दा हिँड्दै मर्छन् !
By रिता घिसिंग on ३० पुष २०७४, आईतवार ०४:०२ रोचक खबर
एजेन्सी : नेपालीको प्रतिब्यक्ति आयू ७० वर्षको भएपनि अधिकांश नेपालीहरु थला परेर आफ्नो जीवन गुमाउँछन् । तर पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तानको पहाडि इलाकामा बस्ने हुन्जा आदिवासी समुदायका मानिसहरुको आयू १२० वर्षको हुन्छ ।
पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार उनीहरुको गुणस्तरीय जिवनशैली, उत्तम आहार, नियमित व्यायाम तथा खुसीपूर्ण मनस्थितिका कारण उनीहरु स्वस्थ रहनु, आयु बढी हुनु मुख्य कारण हो ।
पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार यो समुदायको रोचक पक्ष त अझ के छ भने यहाँका महिलाहरुले ६५ वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माउने क्षमता राख्छन् ।
बुढ्यौलीलाई चक्मा दिने यो समुदायको जैविक क्षमता तथा उनीहरुको जिनको बारेमा गहन अध्ययन गर्न सकियो भने त्यसले समग्र मानव समुदायको स्वास्थ्यमा बढोत्तरी गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।जसका कारण पनि यहाँका मानिसहरु थला नपरी हिँड्दा हिँड्दै मरेका उदाहरण धेरै छन् ।